Ndị Ikpe 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 15:1-20
15 O wee ruo mgbe nwa oge gasịrị, n’oge a na-ewe ọka wit n’ubi, na Samsịn ji nwa ewu+ gaa ileta nwunye ya. O wee sị: “M ga-abakwuru nwunye m n’ime ụlọ ya.”+ Ma nna nwunye ya ekweghị ka ọ banye. 2 Kama nna nwunye ya sịrị: “M sịrị n’ime obi m, ‘N’ezie, ị kpọrọ ya asị.’+ M wee kpọnye ya enyi gị nwoke.+ Ọ̀ bụ na nwanne ya nke nta akaghị ya mma? Biko, lụọ ya kama ịlụ onye nke ọzọ.” 3 Otú ọ dị, Samsịn sịrị ha: “Na nke ugbu a, ikpe agaghị ama m n’ihe ọ bụla m ga-eme ndị Filistia ma ọ bụrụ na mụ emee ha ihe ọjọọ.”+ 4 Samsịn wee pụọ gaa jide narị nkịta ọhịa atọ,+ chịta ọwa ọkụ, were otu ọdụ nkịta ọhịa kekọta n’ọdụ nkịta ọhịa ọzọ, tinye otu ọwa ọkụ n’agbata ọdụ abụọ ahụ e kekọtara ọnụ. 5 O wee mụnye ọkụ n’ọwa ndị ahụ wee chụga ha n’ubi ọka ndị Filistia, nke ọka ya kwụcha ọtọ. O wee si otú a gbaa ihe niile ọkụ, malite n’ùkwù ọka ruo n’ọka kwụ ọtọ na ubi vaịn na ubi oliv.+ 6 Ndị Filistia wee malite ịsị: “Ònye mere ihe a?” Ha wee sị: “Ọ bụ Samsịn ọgọ onye Timna, n’ihi na ọ kpọọrọ nwunye Samsịn kpọnye enyi ya.”+ Ndị Filistia wee gbagoo kpọọ nwaanyị ahụ na nna ya ọkụ.+ 7 Samsịn wee sị ha: “Ọ bụrụ ihe a ka unu mere, o nweghị ihe ọzọ m ga-eme ma ọ bụghị ịbọrọ onwe m ọbọ n’ahụ́ unu,+ m mesịa ya, mụ ahapụzie.” 8 O wee sụọ ha akwụ, tụkọba ụkwụ na apata ụkwụ ha ọnụ, wee gbadaa biri n’ọgba nnukwu nkume Itam.+ 9 Mgbe e mesịrị, ndị Filistia+ gbagotere wee maa ụlọikwuu na Juda+ ma na-agagharị na Lihaị.+ 10 Ndị Juda wee sị: “Gịnị mere unu ji bịa ibuso anyị agha?” ha wee sị: “Anyị bịara ike Samsịn agbụ, ime ya dị nnọọ ka o mere anyị.” 11 Puku ndị Juda atọ wee gbadaa n’ọgba nnukwu nkume Itam+ wee sị Samsịn: “Ọ̀ bụ na ị maghị na ọ bụ ndị Filistia na-achị anyị?+ Gịnịzi ka ihe a i mere anyị pụtara?” O wee sị ha: “Emere m ha dị nnọọ ka ha mere m.”+ 12 Ma ha sịrị ya: “Ihe mere anyị ji bịa bụ ka anyị kee gị agbụ, ka anyị nyefee gị n’aka ndị Filistia.” Samsịn wee sị ha: “Ṅụọrọnụ m iyi na unu onwe unu agaghị emerụ m ahụ́.” 13 Ha wee sị ya: “Ee e, naanị ihe anyị ga-eme bụ ike gị agbụ, anyị ga-enyefekwa gị n’aka ha; ma anyị agaghị egbu gị.” Ha wee jiri ụdọ ọhụrụ abụọ+ kee ya, kpụpụta ya ná nnukwu nkume ahụ. 14 Ya onwe ya wee bịarute Lihaị, ndị Filistia wee tie mkpu ọṅụ mgbe ha hụrụ ya.+ Mmụọ Jehova+ wee malite ịkpa ike n’ahụ́ ya, ụdọ ndị ahụ e kere ya n’aka wee dị ka eriri ákwà linin a ṅara n’ọkụ,+ agbụ e kere ya n’aka wee gbazee. 15 O wee hụ ọkpụkpụ agba oké ịnyịnya ibu nke na-akpọbeghị nkụ, wee matịa aka were ya kụgbuo otu puku ndị ikom.+ 16 Samsịn wee sị: “Eji m ọkpụkpụ agba oké ịnyịnya ibu gbuo ha—ha atọgbọrọ n’ikpo n’ikpo! Eji m ọkpụkpụ agba oké ịnyịnya ibu kụgbuo otu puku ndị ikom.”+ 17 O wee ruo na mgbe o kwusịrị nke ahụ, ọ tụhapụrụ ọkpụkpụ agba ahụ ozugbo wee kpọọ ebe ahụ Remat-lihaị.+ 18 Akpịrị wee kpọwa ya nkụ, o wee malite ịkpọku Jehova, sị: “Ọ bụ gị nyere ohu gị nzọpụta a dị ukwuu,+ ugbu a, agụụ mmiri ọ̀ ga-agụgbu m, m̀ ga-adabakwa n’aka ndị a na-ebighị úgwù?”+ 19 Chineke wee gbapuo olulu yiri íkwè nke dị na Lihaị, mmiri+ wee si na ya na-agbapụta, o wee ṅụọ mmiri, mmụọ ya+ wee laghachite, o wee nweta ume.+ Ọ bụ ya mere o ji kpọọ aha ya En-hakọre, bụ́ nke dị na Lihaị ruo taa. 20 O wee kpee Izrel ikpe n’oge ndị Filistia ruo afọ iri abụọ.+
Ndị Ikpe 15